Cha cha Games On Mobile Bill |Lucks cha cha | Jidere £ 5 Free daashi
Home » Cha cha Games On Mobile Bill | Lucks cha cha | Jidere £ 5 Free daashi
Ugbu a Tinye ebubo maka Casino Games On Mobile Bill ọsọ ọsọ na mfe Mgbe Lucks Casino – Jidere £ 5 Free daashi
Omiiko-agba chaa chaa nwere ike ugbu a tinye ebubo ma ọ bụ inyefe cha cha egwuregwu on mobile ụgwọ na-akwụ a ke ukperedem ụbọchị na Lucks cha cha. N'ihi ya, ha enweghị iji hụ mgbe niile na ha nwere zuru ezu ego iji na-enwe ike na-ekere òkè na ọhụrụ mobile ohere mpere na Internet.
Ebighị Usoro bụ dị mfe na mfe na ego Mkpa a ga-akwụ na njedebe nke ọnwa ọ bụla – Jikọọ ugbu a
Ekwentị ụgwọ ohere mpere nhọrọ mfe iji bọọ na-emekarị abuana ahịa na-akwụ ụgwọ ndị oghere egwuregwu ego na ndị ha na ha na ekwentị na ụgwọ ịkwụ ụgwọ na njedebe nke ọnwa ọ bụla. Ịkwụ ụgwọ maka cha cha egwuregwu on mobile ụgwọ na-anabata n'ebe ego dị ka nke ọma dị ka kaadị ọ bụ ezie na ọ bụ a kaadị ịkwụ ụgwọ nke a na-ahọrọkarị.
Ebighị usoro dị mfe:
Iji-enwe ike iji cha cha egwuregwu on mobile ụgwọ ụlọ ọrụ, nhọrọ n'ihi na nke a ga--arụ ọrụ na cha cha website.
The ebighị usoro nwere ike rụrụ na a ngwa na mfe ụzọ ahụ na-adịghị ewe ihe karịrị nkeji iri.
Ozugbo ebighị nke ụgwọ na ekwentị na ụgwọ cha cha nhọrọ e mere, a nkwenye ga-eziga ka adreesị ozi-nke cha cha ọrụ.
Details banyere cha cha ego site na ekwentị na ụgwọ ụlọ ọrụ nwere ike mgbe ahụ na-agụ site na ndị ahịa na ya email.
Ezigbo Banking Details chọrọ n'aka Lucks Casino Ahịa
Otu n'ime ndị prerequisites ka eji cha cha egwuregwu on mobile ụgwọ ụlọ ọrụ na a cha cha bụ ndokwa nke ezigbo ichekwa ego na bank nkọwa. Ndị a na-achọrọ tumadi maka nzube nke nche. N'ezie, na SMS ụgwọ cha cha nhọrọ na-arụ ọrụ nanị mgbe ichekwa ego na bank nkọwa osụk site ahịa e nnọọ juputara kwupụtara.
Ọ dịghị Tax imposition On The ego Rates Mgbe Lucks Casino
The mobile ụgwọ ụlọ ọrụ na-adịghị abuana tax impositions nke ọ bụla ụdị. ahịa nwere ike, Ya mere, a ga-itukwasi nke inwe ike iji ndị dị otú ahụ mobile cha cha ekwentị na ụgwọ ụlọ ọrụ na-enweghị na-akwụ nnukwu ego nke tax na njedebe nke ọnwa ọ bụla. Ihe ọzọ bụ, -akpali akpali discounts Enwere ike nye on cha cha ego ọnụego maka ọrụ nke cha cha egwuregwu on mobile ụgwọ ụlọ ọrụ. Nke a bụ a nnukwu gbakwunyere n'ihi na mgbe nile ịgba chaa chaa riri na-achọ ka zọpụta ego na ha Ịgba Cha Cha eme online.
irè n'ihi na 1 afọ na ọ dịghị ihe ọzọ:
The mobile cha cha ekwentị ụgwọ nhọrọ ịnọgide irè n'ihi na ojiji maka mbụ oge ọrụ maka oge nke otu afọ.
Mgbe a afọ merenụ, cha cha ụgwọ site na ekwentị ụgwọ nhọrọ ga--ọhụrụ otu ugboro ọzọ.
The ụgwọ site na ekwentị ụgwọ egwuregwu invoices na-na-zitere n'elu email ma mgbe ụfọdụ, ndị a nwere ike zigara site na SMS owuwu dị ka nke ọma.
The ụlọ ọrụ maka cha cha egwuregwu on mobile ụgwọ pụrụ ọhụrụ n'ihi na dị ka ọtụtụ ndị na atọ afọ anọ na oge.
Adọ ịkwụ ụgwọ ghọrọ ka Zere Penalties
All cha cha egwuregwu on mobile ụgwọ invoices nwere ga-akwụ ụgwọ on oge izere a ugwo. Ereta na-mgbe nyere n'elu ugwo nke akwụkwọ ọnụahịa. Ndị a kwa na-emailed ka ahịa.